कटिङहरू किन्नुहोस् | दुर्लभ र अद्वितीय घर बिरुवाहरू अर्डर गर्नुहोस् - काट्ने पत्र
आमाको दिन २०२२ को प्रस्ताव
दुर्लभ घर बिरुवाहरू
Eurobangers सम्झौता सम्झौता
टेरारियम र बोतल बगैचा बिरुवाहरू
नि: शुल्क काट्ने र बिरुवाहरू
हावा शुद्ध गर्ने बिरुवाहरू
झाडी र झाडीहरू
ठाडो geraniums जोनल
मापन = जान्ने
रिक्त स्थान: प्याकर, अर्डर पिकर
प्रतीक्षा सूची प्रतीक्षा सूची
मौलिक प्रचार उपहार
GiveAway फोटो प्रतियोगिता
5 सुझावहरू जब तपाइँको कटिङ तपाइँको काटनमा आइपुग्छ
Alocasia: सुन्दर र विदेशी घर बिरुवाहरू
घरका बिरुवाहरू रिपोटिंग
5 साधारण घर बिरुवाहरू
छाया घर बिरुवाहरू
ठूला घर बिरुवाहरू
मलाई कस्तो आकारको फूलको भाँडो चाहिन्छ?
5 सजिलो घर बिरुवा
शीर्ष 10 हाउसप्लान्ट प्रवृतिहरू
घरको बिरुवा हेरचाहको लागि 10 सुझावहरू
10 बच्चा-अनुकूल घर बिरुवाहरू
घर बिरुवा मा प्रवृत्ति
घर बिरुवाहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो हेरचाह
मेरो घरको बिरुवामा बगहरू!
फिलोडेन्ड्रोन - उत्पत्ति र हेरचाह सुझावहरू
नरिवल फाइबर; आदर्श रोपण, काट्ने र भाँडो माटो
डिसेम्बर सुझावहरू - क्रिसमस संस्करण
क्रिसमस ट्री आउट, २०२१ मा हाउसप्लान्ट
मद्दत गर्नुहोस्! मेरो घरको बिरुवामा पहेँलो पातहरू
तपाईं ग्राहक वा उत्पादक हुनुहुन्छ?
समाचार पत्र काट्ने पत्र
पत्र काट्ने भर्खरका संस्करणहरू
महिनाको घर बिरुवा
Monstera Variegata युवा काटन
के तपाइँ एक दुर्लभ अनरूट काट्ने संग चुनौती लिनुहुनेछ? †
मेरो पक्षमा आउनुहोस्!
Syngonium Albo। लगभग। काट्ने
आफैलाई वा तपाईंको साथीको लागि राम्रो उपहार? †
Monstera Pinnati partita काटन
हाम्रो सांसदसँग यस भ्यालेन्टाइन डेमा आफ्नो साथीलाई छक्क पार्नुहोस्
Monstera Variegata - युवा काटन!
यो हरियो सहरी चुनौती मा डेयरडेभिल!?
हो, म हिम्मत गर्छु, उसलाई जीवित राख्नुहोस्! †
सेनर फिलोडेन्ड्रोन कोब्राह :-)
फिलोडेन्ड्रोन कोबरा एक धेरै दुर्लभ र विशेष बिरुवा हो किनभने यसको विभिन्न रंगहरु संग विशेष पातहरु छन्।
फिलोडेन्ड्रोन बर्ले मार्क्स भेरिगाटा अनरूटेड कटिंग
फिलोडेन्ड्रन बर्ले मार्क्स भेरिगाटा सुन्दर विविधरङ्गी पातहरू भएको दुर्लभ फिलोडेन्ड्रन हो।
के तपाई साँच्चै आफ्नो श्रीमती वा प्रेमिकालाई Pilea Mojito मार्फत खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ?
स्फग्नम काईमा काटनहरू
चरण-दर-चरण योजना: शुरुआतीहरूको लागि स्फग्नम काईमा काट्ने
रोडम्यापब्याक्टेरिया-रहित स्फग्नम काई किन्नुहोस्
एक आश्चर्य हामी संग धेरै महँगो हुनु पर्दैन
किनकी छक्क पर्नु भन्दा रमाइलो केहि छैन!
सरप्राइज कटिङ बक्स जरा5पीसीसरप्राइज कटिङ बक्स अनरूट गरिएको ४ पीसी
एक दिगो व्यापार उपहार?
घर उपहारबाट हाम्रो हरित कार्यको साथ तपाईका प्रिय सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद!
आश्चर्य काट्ने बक्सथप जानकारी?
आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी आश्चर्य?
ग्रीटिंग कार्डको साथ उसलाई Hoya Kerri Double Hearts पठाउनुहोस्!
होया केरी डबल हार्ट्सअभिवादन कार्ड
अष्ट्रेलियामा बिरुवा प्रेमी देखि नेदरल्याण्ड मा बिरुवा कलेक्टर सम्म
यसलाई सुन्दर शहरी जंगल बनाउनुहोस्!
तपाइँको लेटरबक्स मार्फत तपाइँका सबै सपना बिरुवाहरू प्राप्त गर्नुहोस्!
उपहार सुझाव: आमा
कसरी आमालाई घरमा वा टाढाबाट मौलिक तरिकामा आश्चर्यचकित गर्ने?
आश्चर्य बक्सरातो कोठाको भाँडो गुलाब
तपाइँको सबै काटनहरु को लागी काटन मिश्रण
यो कटिङ मिक्स प्रिमियम प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको बच्चाको कटिङलाई राम्रो वृद्धिको सुरुवात दिनको लागि।
10 L Perlite तपाइँको कटिंग को लागी
perlite को साथ आफ्नो काटन साहसिक सुरु गर्नुहोस्!
एन्थुरियम क्रिस्टलिनम जरा काट्ने
सि सि सि !
तपाईंले सोध्नुभयो, र हामीले सुन्यौं :)
उनको वा उनको लागि भ्यालेन्टाइन डे उपहारको रूपमा9x हरियो बिरुवाहरू
पङ्क्तिमा हाम्रा लोकप्रिय काटिङ्गहरू र बिरुवाहरू
€94,95 माथिका अर्डरहरूमा नि:शुल्क ढुवानी [NL]
आउदैछ, घर बिरुवाहरु
Alocasia Frydek Variegata को लागी खरीद र हेरचाह गर्दै
Alocasia Frydek Variegata एक दुर्लभ र सुन्दर घर बिरुवा हो। यसमा धनी गाढा गहिरो हरियो, सेक्टोरल र स्प्ल्याश-जस्तो विविधताहरू, र विपरित सेतो नसहरू भएका साँघुरो हृदयको आकारको मखमली पातहरू छन्। पेटीओल्सको लम्बाइ तपाईले आफ्नो बिरुवालाई कति वा थोरै प्रकाश दिनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। छायाहरू कायम राख्न प्रकाश चाहिन्छ।
Alocasia पानी मनपर्छ र उज्यालोमा हुन मनपर्छ ...
Philodendron Melanochrysum किन्नुहोस्
Philodendron melanochrysum Araceae परिवारमा फूल फुल्ने बिरुवाको एक प्रजाति हो। यो विशेष र आकर्षक फिलोडेन्ड्रोन अत्यन्त दुर्लभ छ र यसलाई कालो सुनको रूपमा पनि चिनिन्छ।
Philodendron Melanochrysum unrooted cuttings किन्नुहोस्
प्रस्तावहरू, घर बिरुवाहरु
सिङ्गोनियम रेड स्पट ट्राइकोलर कटिङहरू किन्नुहोस्
बिरुवालाई हल्का स्थानमा राख्नुहोस्, तर प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशमा होइन। यदि बिरुवा धेरै गाढा छ भने, पातहरू हरियो हुनेछ।
माटोलाई थोरै नम राख्नुहोस्; माटो सुकाउन नदिनुहोस्। एक पटकमा धेरै भन्दा थोरै मात्रामा पानी पिउनु राम्रो हो। पहेँलो पात भनेको धेरै पानी दिनु हो।
पिक्सीलाई गर्मीमा स्प्रे गर्न मन पर्छ!
Monstera adansonii variegata किन्नुहोस् - भाँडो 12 सेमी
मोन्स्टेरा एडान्सोनी भेरिगाटा, जसलाई 'होल प्लान्ट' वा 'फिलोडेन्ड्रन मोन्की मास्क' भेरीगाटा पनि भनिन्छ, प्वालसहितको विशेष पातहरू भएका कारण यो धेरै दुर्लभ र विशेष बोट हो। यो बिरुवाको उपनाम पनि छ। मोन्स्टेरा ओब्लिक्वा मूलतः दक्षिण र मध्य अमेरिकाको उष्णकटिबंधीय जंगलहरूमा बढ्छ।
बिरुवालाई न्यानो र हल्का ठाउँमा राख्नुहोस् र…
प्रस्तावहरू, ब्ल्याक फ्राइडे सौदा २०१
Monstera obliqua adansonii variegata - बिना जराको टाउको काट्ने
मोन्स्टेरा ओब्लिक्वा भेरीगाटा, जसलाई 'होल प्लान्ट' वा 'फिलोडेन्ड्रन मोन्की मास्क' भेरीगाटा पनि भनिन्छ, प्वालसहितको विशेष पातहरू भएका कारण यो अत्यन्त दुर्लभ र विशेष बोट हो। यो पनि यो बिरुवालाई यसको उपनाम दिन्छ। मोन्स्टेरा ओब्लिक्वा मूलतः दक्षिण र मध्य अमेरिकाको उष्णकटिबंधीय जंगलहरूमा बढ्छ।
Monstera adansonii variegated किन्नुहोस् - बर्तन 13 सेमी
Monstera adansonii variegata - जड नभएको काटिङ्ग किन्नुहोस्
Monstera Dubia किनमेल र unrooted cuttings को लागी हेरचाह गर्दै
Monstera dubia साधारण Monstera deliciosa वा Monstera adansonii भन्दा Monstera को एक दुर्लभ, कम ज्ञात विविधता हो, तर यसको सुन्दर विविधता र चाखलाग्दो बानीले यसलाई कुनै पनि घरको बिरुवा संग्रहमा उत्कृष्ट थप गर्दछ।
उष्णकटिबंधीय मध्य र दक्षिण अमेरिकाको यसको मूल निवास स्थानमा, मोन्स्टेरा डुबिया रूखहरू र ठूला बोटबिरुवाहरू चढ्ने एउटा घस्रने बेल हो। किशोर बिरुवाहरु द्वारा विशेषता हो ...
Monstera albo borsigiana variegata - जवान कटिङहरू किन्नुहोस्
De Monstera Variegata निस्सन्देह २०२१ को सबैभन्दा लोकप्रिय बिरुवा हो। यसको लोकप्रियताको कारण, उत्पादकहरूले माग पूरा गर्न मुश्किलले नै सक्छन्। Monstera को सुन्दर पातहरु सजावटी मात्र होइन, तर यो एक हावा शुद्ध बिरुवा पनि हो। चीनमा, Monstera दीर्घायुको प्रतीक हो। बिरुवाको हेरचाह गर्न एकदम सजिलो छ र यो मा बढ्न सकिन्छ ...
घर बिरुवाहरु, साना बिरुवाहरु
Syngonium Podophyllum Albo Variegata किन्नुहोस्
Syngonium Red Spot Tricolor किन्नुहोस् र हेरचाह गर्नुहोस्
Syngonium Green Splash cuttings किन्नुहोस् र हेरचाह गर्नुहोस्
सिङ्गोनियमले गर्मीमा स्प्रे गर्न मन पराउँछ!
Syngonium प्रविष्ट गर्नुहोस्...
मोन्स्टेरा एडान्सोनी लानियाटा अनरुटेड काटिङ्ग बिक्रीको लागि
Monstera adansonii laniata unrooted cutting, जसलाई 'hole plant' वा 'philodendron Monkey मास्क' पनि भनिन्छ, एक विशेष छ। बिरुवा प्वाल भएका विशेष पातहरूको कारण। यो बिरुवाको उपनाम पनि छ। मूल रूपमा Monstera adansonii laniata को उष्णकटिबंधीय जंगलहरूमा बढ्छ दक्षिण र मध्य अमेरिका.
बिरुवालाई न्यानो र हल्का ठाउँमा राख्नुहोस्...
Monstera albo borsigiana variegata - जरा भएको टाउको काट्ने
De Monstera Variegata निस्सन्देह 2019 को सबैभन्दा लोकप्रिय बिरुवा हो। यसको लोकप्रियताको कारण, उत्पादकहरूले मुश्किलले माग पूरा गर्न सक्छन्। Monstera को सुन्दर पातहरु फिलोडेन्ड्रन यो सजावटी मात्र होइन, यो एक हावा शुद्ध प्लान्ट पनि हो। मा चीन Monstera लामो जीवन को प्रतीक हो। बिरुवा हेरचाह गर्न एकदम सजिलो छ ...
Syngonium Albo variegata semimoon unrooted cuttings किन्नुहोस्
Syngonium Podophyllum Albo Variegata unrooted head काटन
Monstera albo borsigiana variegata - जरा काट्ने
Monstera albo borsigiana variegata - युवा काट्ने
De Monstera Variegata निस्सन्देह 2021 को सबैभन्दा लोकप्रिय बिरुवा हो। यसको लोकप्रियताको कारण, उत्पादकहरूले मुश्किलले माग पूरा गर्न सक्छन्। Monstera को सुन्दर पातहरु फिलोडेन्ड्रन यो सजावटी मात्र होइन, यो एक हावा शुद्ध प्लान्ट पनि हो। मा चीन Monstera लामो जीवन को प्रतीक हो। बिरुवा हेरचाह गर्न एकदम सजिलो छ ...
Syngonium Green Splash किन्नुहोस् र हेरचाह गर्नुहोस्
Rhapidophora tetrasperma minima variegata cuttings किन्नुहोस्
न्युजिल्याण्डको लिलामी साइटमा बिडिङ युद्ध पछि, कसैले रेकर्ड $9मा केवल 19.297 पातहरु संग यो घर बिरुवा किन्यो। मोन्स्टेरा मिनिमा भेरिगाटा पनि भनिने एउटा दुर्लभ सेतो रंगको राफिडोफोरा टेट्रास्पर्मा भेरिगाटा बिरुवा भर्खरै अनलाइन लिलामीमा बेचिएको थियो। यसले सार्वजनिक बिक्री वेबसाइटमा "सबैभन्दा महँगो हाउसप्लान्ट" बनाउँदै $ 19.297 ल्यायो। व्यापार…
सिङ्गोनियम रेड हार्ट अनरुटेड कटिङहरू किन्नुहोस्
सिङ्गोनियम स्ट्रबेरी आइस कटिङहरू किन्नुहोस् र हेरचाह गर्नुहोस्
सिङ्गोनियम पिंक स्प्ल्याश अनरूट कटिङहरू किन्नुहोस्
फिटोनिया बबल रातो - मोजेक प्लान्ट
मोजाइक प्लान्ट (फिट्टोनिया) एक कम-बढ्ने बिरुवा हो जुन बाट आउँछ दक्षिण अमेरिका (पेरु)† 'सानो, तर साहसी' फिटोनियालाई पक्कै पनि भन्न सकिन्छ। 2007 को शरद ऋतुमा यसको परिचय पछि, 100.000 भन्दा बढी एकाइहरू बेचिएको छ। यो मोजेक बिरुवा, जसलाई फिटोनिया पनि भनिन्छ, भाँडोको रिम माथि मात्रै पाँच सेन्टिमिटर माथि उठ्छ। तर स्पष्ट रूपमा उसलाई थाहा छ ...
ब्ल्याक फ्राइडे सौदा २०१, घर बिरुवाहरु
फिटोनिया अल्बिभेन्सिस मोज़ेक प्लान्ट रातो पातहरू
मोजाइक प्लान्ट (फिट्टोनिया) एक कम-बढ्ने बिरुवा हो जुन बाट आउँछ दक्षिण अमेरिका (पेरु)† 'सानो, तर बहादुर' लाई निश्चित रूपमा फिटोनिया मोजाइक किंग्स क्रस भन्न सकिन्छ। 2007 को शरद ऋतु मा यसको परिचय पछि, 100.000 भन्दा बढी एकाइहरू बेचिएको छ। यो मोजेक बिरुवा, जसलाई फिटोनिया पनि भनिन्छ, भाँडोको रिम माथि मात्रै पाँच सेन्टिमिटर माथि उठ्छ। तर स्पष्ट रूपमा ...
घर बिरुवाहरु, आमाको दिन २०२२ को प्रस्ताव
फिटोनिया मोन्ट ब्लान्क - मोजाइक प्लान्ट
हाम्रा केहि ग्राहकहरु को अनुभव को बारे मा उत्सुक
शीर्ष सेवा र छिटो वितरण
[EN] द्रुत ढुवानी, र सुन्दर, स्वस्थ बिरुवाहरू! तिनीहरू पूरै सप्ताहन्तको लागि PostNL मा बसेको तथ्यको बावजुद, तिनीहरू अझै राम्रो, राम्रो प्याकेज गरिएको र माटो राम्ररी ओसिलो देखिन्थ्यो। सिफारिस गरिएको!
बिरुवाहरू अद्भुत छन् र राम्रोसँग हेरचाह गरिन्छ
[BE] मेरो पहिलो अर्डर बेल्जियममा केही दिनमै डेलिभर भयो। धेरै राम्रोसँग प्याकेज गरिएको, कटिङहरू र बोटबिरुवाहरू बक्सबाट कुनै क्षति नगरी बाहिर आए। दोहोर्याउन लायक, धन्यवाद!
म निश्चित रूपमा पत्र काट्ने सिफारिस गर्दछु!
इटालीमा हिटप्याक सहित छिटो जाडो डेलिभरी
[IT] जाडोको समयमा इटालीबाट मेरो बिरुवाहरू अर्डर गरे, बिरुवाहरू छिटो आइपुग्यो र तातो प्याक सहित राम्रोसँग प्याकेज गरियो! धेरै राम्रो मूल्यहरू साथै ग्राहक सेवाबाट छिटो प्रतिक्रिया। म निश्चित रूपमा यो पसल सिफारिस गर्दछु!
मेरा सबै बिरुवाहरू सुरक्षित रूपमा जर्मनी आइपुगे
[DE] मेरा सबै घरका बिरुवाहरू पोष्टएनएल क्रमबद्ध गर्न4दिन ढिलाइ र जर्मनी हुलाक सेवामा4दिन पछि पनि राम्ररी प्याक आइपुगे। तपाईको राम्रो प्याकिङ र अद्भुत फलो-अप सेवा राम्रो सेवाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
फ्रान्समा द्रुत ढुवानीको लागि ठूलो धन्यवाद
[FR] म तपाइँलाई पुष्टि गर्न सक्छु कि मैले फिलोडेन्ड्रोन गुलाबी राजकुमारी बिना कुनै समस्या प्राप्त गरेको छु। फ्रान्समा यो द्रुत ढुवानीको लागि ठूलो धन्यवाद!
म अत्यधिक SB सिफारिस गर्न सक्छु!
अस्ट्रियामा साँच्चै राम्रोसँग प्याक गरिएको
[AU] बिरुवाहरू मलाई सुरक्षित रूपमा आइपुगे, र प्याकेज वास्तवमै राम्रोसँग प्याक गरिएको छ र बिरुवाहरू पनि वास्तवमै राम्रो अवस्थामा छन्! सबै कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद! र म 100% मेरो अर्डर फेरि तपाइँमा राख्नेछु!
हामी महिनामा एक पटक Stekjes (समाचार) पत्र पठाउँछौं :-)
इ - मेल ठेगाना: मैले नियम र सर्तहरू पढेको छु र सहमत छु
यदि तपाईं मानव हुनुहुन्छ भने यो क्षेत्र खाली छोड्नुहोस्:
यहाँ हाम्रा भर्खरका ब्लगहरू छन्
भाँडो माटो र माटो कभर
माटो सुधार गर्न र बिरुवाको वृद्धिलाई उत्तेजित गर्न पेरलाइट कसरी प्रयोग गर्ने
perlite के हो? "माटोको लागि हावा" भनेको के हो, र यो कम्पोस्ट र माटोको संरचना सुधार गर्ने दोस्रो उत्तम तरिका हो। तपाईंको बगैंचामा perlite प्रभावकारी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे व्यावहारिक सुझावहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
5 सुझावहरू जब तपाइँको कटिङ्हरू तपाइँको काटनमा आइपुग्छ तपाइँलाई सायद यो थाहा छ, तपाइँको कटिङहरू अन्ततः लामो यात्रा पछि तपाइँको घरमा छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई एउटा भाँडो दिनुहुन्छ, तपाईंले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ थप पढ्नुहोस्…
मद्दत गर्नुहोस्! मेरो घरका बिरुवाहरूमा पहेँलो पातहरू तपाईं आफ्नो हरियो घरको बिरुवाको पूर्ण आनन्द लिनुहुन्छ, तर त्यसपछि... अचानक तपाईंले पहेँलो पातहरू देख्नुहुन्छ! यसको अर्थ के हो र तपाईं यसको बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ? यो धेरै कारण हुन सक्छ थप पढ्नुहोस्…
चरण-दर-चरण योजना: पर्लाइट र स्फग्नम काईको मिश्रणमा काट्ने
चरण-दर-चरण योजना: पर्लाइट र स्फ्याग्नम काईको मिश्रणमा कटिङहरू। बिरुवा काट्ने। यो धेरै सजिलो लाग्दछ, र यदि तपाइँ सही चरणहरू पछ्याउनुहोस् र सही आपूर्तिहरू छन् भने यो हो। थप पढ्नुहोस्…
चरण-दर-चरण योजना: कसरी मोन्स्टेरा भेरीगाटा काट्ने जरा सडबाट बचाउने
चरण-दर-चरण योजना: जरा सडबाट काट्ने बचत गर्नुहोस् यो मात्र हुन सक्छ: तपाईं उदार जराहरू भएको सुन्दर मोन्स्टेरा भेरिगाटा काट्नेबाट, केही हप्तामा चिल्लो जराको अवशेषहरू भएको दुखद पातमा जानुहुन्छ। धेरै दुखी हुनु थप पढ्नुहोस्…
स्ट्रबेरी बढ्दो बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा
स्ट्रबेरी बढ्दो समर बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा लगभग यहाँ छ! र गर्मीमा स्ट्रबेरी कसलाई मन पर्दैन। अझ राम्रो, जसले आफ्नै ताजा मन पराउँदैन थप पढ्नुहोस्…
मेरो घरको बिरुवाको लागि मलाई कस्तो आकारको फूलको भाँडो चाहिन्छ?
मेरो घरको बिरुवाको लागि मलाई कस्तो आकारको फूलको भाँडो चाहिन्छ? बिरुवाहरू खरिद गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले सही फूलको भाँडो किन्नु भएको छ जुन तपाईंले खरिद गर्नुभएको बिरुवाको प्रकारसँग मेल खान्छ। उचित थप पढ्नुहोस्…
5 सुझावहरू: SOS, मेरो बोट संकटमा छ!
5 सुझावहरू: SOS, मेरो बोट संकटमा छ! के तपाइँ त्यो चिन्नुहुन्छ? तपाईं आफ्नो बिरुवाको छेउमा चुपचाप हिँड्नुहुन्छ, तपाईं पछाडि हेर्नुहुन्छ, र अचानक BAM! उसले जीवन त्यागेको जस्तो गरी घुम्छ। शंका होला थप पढ्नुहोस्…
चरण-दर-चरण योजना: शुरुवातकर्ताहरूको लागि पर्लाइटमा कटिङहरू
चरण-दर-चरण योजना: शुरुवातकर्ताहरूको लागि पर्लाइटमा कटिङहरू बिरुवा काट्ने। यो धेरै सजिलो लाग्दछ, र यदि तपाइँ सही चरणहरू पछ्याउनुहोस् र सही आपूर्तिहरू छन् भने यो हो। यस लेखमा हामी व्याख्या गर्छौं थप पढ्नुहोस्…
चरण-दर-चरण योजना: एयरलेयरिङ हाउसप्लान्ट फिलोडेन्ड्रोन भेरुकोसम
चरण-दर-चरण योजना: एयरलेयरिङ फिलोडेन्ड्रन हाउसप्लान्टहरू तपाईंको घरमा हाउसप्लान्टहरू राख्नु तपाईंको घरमा केही प्रकृति ल्याउने अद्भुत तरिका हो। कहिलेकाहीँ तिनीहरू अतिवृद्धि हुन सक्छन्, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले तिनीहरूलाई तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ थप पढ्नुहोस्…
कीट घर बिरुवाहरू
कीट भाग २: क्याप्लिस र सेतो फ्लाई
कीट भाग 2: हड्डी र सेतो फ्लाई सामग्री तालिका लामखुट्टे जुँगा यसबाट फैलिन्छ: घरपालुवा जनावर, हावा, कपडा, चराहरू र कीराहरू यसबाट फैलिन्छ! सेतो फ्लाई यसद्वारा फैलिन्छ: फ्लाईज डैमेजअवे यसको साथ! लामखुट्टेको जुँगा निको पार्नु भन्दा रोकथाम राम्रो हो: घरपालुवा जनावर, विन लुगा, चराहरू थप पढ्नुहोस्…
चरण-दर-चरण योजना: शुरुवातकर्ताहरूको लागि स्फग्नम काईमा काट्ने बिरुवा काट्ने। यो धेरै सजिलो लाग्दछ, र यदि तपाइँ सही चरणहरू पछ्याउनुहोस् र सही आपूर्तिहरू छन् भने यो हो। यस लेखमा राख्नुहोस् थप पढ्नुहोस्…
चरण-दर-चरण योजना: शुरुवातकर्ताहरूको लागि पानीमा कटिङहरू
चरण-दर-चरण योजना: शुरुवातकर्ताहरूको लागि पानीमा काट्ने बिरुवा काट्ने। यो धेरै सजिलो लाग्दछ, र यदि तपाइँ सही चरणहरू पछ्याउनुहोस् र सही आपूर्तिहरू छन् भने यो हो। यस लेखमा राख्नुहोस् थप पढ्नुहोस्…
चरण-दर-चरण योजना: शुरुवातकर्ताहरूको लागि प्रचार बक्समा कटिङहरू
शुरुवातकर्ताहरूको लागि "प्रसार बक्स" मा काट्ने धेरै घर बिरुवाहरू उष्णकटिबंधीय जलवायुबाट उत्पन्न हुन्छन् र यदि तिनीहरू घरमा समान वातावरणमा छन् भने अझ राम्रो हुन्छ। यो अक्सर उच्च आर्द्रता र थप पढ्नुहोस्…
१० टिप्स - गर्मीमा घरको बिरुवाको हेरचाह गर्ने
10 सुझावहरू - गर्मीमा घरका बिरुवाहरूको हेरचाह गर्ने कार्य पूर्ण जोशमा छ र तापक्रम बढिरहेको छ। यो हाम्रो लागि न्यानो छ, तर तपाइँको घर मा घर बिरुवाहरु को लागी पनि। मा थप पढ्नुहोस्…
के तपाईलाई हाम्रो बारेमा थप जानकारी चाहिन्छ?
STEKJESLETTER.NL (अपोइन्टमेन्ट द्वारा मात्र भ्रमण गर्नुहोस्) Wilgenroos 11, 2391 EV Hazerswoude-Dorp, NL
हामीलाई LiveChat सन्देश पठाउनुहोस्
24/7 LiveChat बिक्री समर्थन
आईडियल / क्रेडिट कार्ड / Paypal / स्याउ पे / ING Home'Pay / bancontact / KBC - सीबीसी / बेलफियस प्रत्यक्ष नेट / सफ्ट बैंकिंग / Giropay / ईपीएस / २fers स्थानान्तरण
तपाईको इमेल ठेगाना (आवश्यक)
तपाई पनि हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोला
हो! उनी बिरुवा प्रेमीहरू मध्ये एकको रूपमा चिनिन्छन्
यो ग्रीन बेबीडल होमलोमेना पन्ना रत्न ओ जाँच गर्नुहोस्
रेड सेक्रे नामक यो सानी केटीलाई कसरी हेरचाह गर्ने
के तपाई उत्तम दिगो ईस्टर gi खोज्दै हुनुहुन्छ
दुर्लभ मोन्स्टेरा सिल्टेपेकाना अनरुटेड काटन छ
फिलोडेन्ड्रोन फ्लोरिडा भूत मात्र दुर्लभ होइन
सफलताको कथा - साझेदारी एक प्यारा पीएचडी को हेरचाह छ
Crassula Pyramidalis एक सुन्दर Crassula s हो
Dracaena, जसलाई ड्र्यागन ट्री पनि भनिन्छ, bec हो
यस समयमा सबैभन्दा इच्छा Syngonium मध्ये एक हो
साँच्चै सबै alocasia को एक अद्भुत दुर्लभ बिरुवा !!! पहिले नै
Peperomia Caperata एक रमाइलो र रंगीन घर हो
थप लोड गर्नुहोस्... Instagram मा पछ्याउनुहोस्
by पत्र काट्दै २ महिना अघि
के तपाईंले यो पेन्टेड पिंक लेडी जस्तो सुन्दर दुर्लभ बोट देख्नुभएको छ? फिलोडेन्ड्रन पेन्टेड -पिंक - लेडी ए
प्लेटिसेरियमलाई सामान्यतया स्ट्याघर्न वा एल्खोर्न फर्न (डच: हर्टशुर्न फर्न) भनिन्छ किनभने तिनीहरूको अनौठो अद्भुत, अनौठो, एंटलर आकारका पातहरू छन्। तिनीहरू
Epipremnum pinnatum बिरुवाहरू चीन, ताइवान, जापान, भारत, मलेसिया, उत्तरी अष्ट्रेलिया, वा
Tillandsia - सामान्यतया airplants भनेर चिनिन्छ, यी वनस्पति जिज्ञासाहरु जंगल, वर्षा वन वा मरुभूमि मा पाउन सकिन्छ - बाट
एन्थुरियम क्लेरिनेर्भियम - बेबीगल, त्यसको बारेमा, प्यारी!? एन्थुरियम क्लेरिनेर्भियमको ठूलो, बाक्लो,
के तपाई पनि घरमा हुने जिद्दी किराबाट पीडित हुनुहुन्छ ? वेल पोकोन बायो अगेन्स्ट जिद्दी कीराहरू Polysect स्प्रे लड्छ
मित्सुमाता शाखाहरू अग्लो फूलदानमा वा सुकेका फूलहरूसँग संयोजनमा उत्कृष्ट एकल देखिन्छन्। तपाईं अधिकतम बनाउन सक्नुहुन्छ
के तपाईलाई थाहा छ कि एकपटक अर्किड वा फलेनोपसिस फूल फुल्ने समाप्त भएपछि, तपाइँ यसलाई फेरि फूल्न प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ
Peperomia Caperata एक रमाइलो र रंगीन हाउसप्लान्ट हो जुन २० सेन्टिमिटर भन्दा अग्लो हुँदैन। यी गुणहरूको अर्थ हो
साँच्चै सबै alocasia को एक अद्भुत दुर्लभ बिरुवा !!! Alocasia Scalprum मा जटिल वेनेशन संग बाक्लो र रबरी पातहरू छन्, जुन
यस समयमा सबैभन्दा धेरै इच्छा Syngonium मध्ये एक निश्चित रूपमा रातो स्पट तिरंगा हो यी प्रकारका बिरुवाहरू
Dracaena, जसलाई ड्र्यागन ट्री पनि भनिन्छ, बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ र अझै पनि एक सुन्दर बोट प्रजाति हो। बिरुवा
Crassula Pyramidalis राम्रो पातहरु संग एक सुन्दर Crassula प्रजाति हो। यी एक अर्काको धेरै नजिक बढ्छन् र दिन्छन्
सफलताको कथा - सेयर गर्नु भनेको प्यारा फिलोडेन्ड्रन फ्लोरिडा भूत बच्चाको पातको हेरचाह गर्दै धेरै आनन्द र आत्मविश्वास दिँदै
फिलोडेन्ड्रोन फ्लोरिडा भूत सङ्कलन गर्न दुर्लभ घर बिरुवा मात्र होइन, यो एक शानदार आकारको पातहरू जस्तै हो।
दुर्लभ मोन्स्टेरा सिल्टेपेकाना अनरुटेड काटनमा गाढा हरियो नसका पातहरू सहित सुन्दर चाँदीका पातहरू छन्। ह्याङ्गिङ भाँडो वा को लागी उत्तम
के तपाईं आफ्ना सहकर्मीहरूलाई चकित पार्न उत्तम दिगो ईस्टर उपहारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि यो इस्टर उपहार प्याकेज सम्झौता हो
by पत्र काट्दै १ महिना अघि
एलोकासिया परिवारको रेड सेक्रेट भनिने यो सानो केटीलाई कसरी हेरचाह गर्ने? रेड सेक्रेटलाई राम्रोसँग निकास गर्ने माटो चाहिन्छ, यसले सुनिश्चित गर्दछ
by पत्र काट्दै २ हप्ता अघि
यो हरियो बेबीडल होमलोमेना पन्ना रत्न जाँच गर्नुहोस् के उनी हेरचाह गर्न मनमोहक सानो बच्चा मात्र होइनन्? एक
by पत्र काट्दै Days दिन अघि
हो! उनी बिरुवा प्रेमीहरू माझ यस बिरुवा मा सबै Alocasias को सबै भन्दा सुन्दर को रूप मा परिचित छ
हामीलाई सोशल मिडियामा पनि पछ्याउनुहोस्
86 समीक्षाहरूमा आधारित
द्वारा संचालित फेसबुक
उत्कृष्ट ग्राहक सेवा !!!
त्यास विद्यास्तुति सीन-भारतीय
सुन्दर 🪴🪴 छिटो डेलिभरी र पक्कै पनि राम्रोसँग प्याक गरिएको, राम्रो सेवा, मेरो प्रश्नको द्रुत जवाफ। वास्तवमै सिफारिस गर्नुहोस्
एक सुन्दर काटन प्राप्त भयो, यो संग धेरै खुसी!
एक महिना पहिले मैले यहाँ सिङ्गोनियम मोटल्ड र सिङ्गोनियम भेरीगाटा किनेको थिएँ। अरू धेरैको तुलनामा... यी साइटहरू धेरै सस्तो थिए। तिनीहरू राम्रोसँग आइपुगे र त्यसबेलादेखि धेरै राम्रो गरिरहेका छन्। यसमा धेरै खुसी!थप पढ्नुहोस्
आइरिस भ्यान डेन ड्रिस्चेन
मैले यो हप्ता मेरो पहिलो अर्डर राखें। समयमै नआउला भन्ने डर थियो तर सम्पर्क गरेपछि... webshop तिनीहरूले मलाई मेरो अर्डर छिट्टै पठाइनेछ भनेर आश्वासन दिए र यो थियो! मैले दुई दिनमा मेरो अर्डर प्राप्त गरें र काटन मैले सोचे भन्दा पनि सुन्दर थियो! Webshop संग सम्पर्क पनि धेरै रमाइलो थियो। म निश्चित रूपमा यहाँ धेरै पटक अर्डर गर्नेछु!थप पढ्नुहोस्
रिवान्ना भ्यान डेर ग्यालियन
मैले भर्खरै सिङ्गोनियम ग्रीन स्प्ल्याशको साथ मेरो अर्डर प्राप्त गरें। कस्तो राम्रो बिरुवा। पातहरूमा चिन्हहरू अझ राम्रा छन्... वास्तविक जीवनमा तिनीहरू वेबसाइटमा फोटोमा कस्तो देखिन्छन्। साँच्चै खुसी ग्राहकथप पढ्नुहोस्
महान सेवा! अर्डर धेरै चाँडै आइपुग्यो र धेरै राम्रो प्याकेज गरिएको थियो! र अचम्मको रूपमा, बिरुवा पहिले नै एक मा थियो... जार 👌🏻थप पढ्नुहोस्
म साँच्चै खुसी छु कि मैले केहि विशेष बिरुवाहरु मार्फत ब्राउज गर्दा मैले तिनीहरूको पसल पत्ता लगाए। मैले यी धेरै राम्रो किने... तिनीहरूबाट बिरुवाहरू र म तिनीहरूको सेवाबाट धेरै सन्तुष्ट छु। बिरुवाहरू राम्रो क्रममा र धेरै राम्रो प्याकमा आए। तिनीहरूले एउटा अतिरिक्त सानो एन्थुरियम थपे किनभने मैले किनेको एउटा मात्र तीनवटा पातहरू भएको थियो। त्यो इशारा मीठो थियो र मलाई उनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई साँच्चै मूल्यवान् महसुस गराए। मेरो खरिद पछि, मैले आफूलाई तिनीहरूको वेबसाइटमा तिनीहरूका थप बिरुवाहरूको लागि ब्राउज गरेको पाएँ। मालिकहरू पनि धेरै सहज र मिलनसार थिए। मैत्रीपूर्ण र विचारशील कुराकानी गर्न पाउनु साँच्चै राम्रो छ।थप पढ्नुहोस्
जिल जुमान्का फ्रान्कन
धेरै राम्रो र छिटो सेवा। पौडी सोचे भन्दा ठूलो थियो। वास्तवमै सिफारिस गरिएको !!
वितरण संग गलतफहमी, एक दिन भित्र समाधान। शीर्ष! राम्रो गुणस्तर र छिटो डेलिभरी।
भर्मिक्युलाइट किने। वसन्त/गर्मीको लागि बिरुवाहरू सुरु गर्नको लागि राम्रो उत्पादन। छिटो डेलिभरी। सफा प्याकेजिङ्ग। म... खुसी छु! धन्यवाद Cutieletter!थप पढ्नुहोस्
बिरुवा सुन्दर अवस्थामा आइपुग्यो! मैत्री र छिटो डेलिभरी😍
मैले ४० सेन्टीमिटरको बिरुवाको अपेक्षा गरेको थिएँ, ४० सेन्टीमिटरको छाला भएको एक मिटरको फ्राइज 😇 तर तपाईंले मेरो गुनासो सुन्नुहुने छैन !!... म यसमा धेरै खुसी छुथप पढ्नुहोस्
सुरु देखि अन्त्य सम्म अत्यधिक सिफारिस गरिएको। तपाईंलाई प्रेषणको लागि प्रशोधनबाट सूचित राखिनेछ। तापक्रम थियो... हल्का तर निश्चित हुनको लागि तातो प्याक आयो। अर्को दिन डेलिभरी थियो! सबै कुरा सफा र सुरक्षित रूपमा प्याक गरिएको थियो। त्यसोभए सबै कुरा ठीक आइपुगेको छ! बिरुवाहरू राम्रो र स्वस्थ देखिन्छन्! सिफारिस गरिएको! अर्को सम्म!थप पढ्नुहोस्
धेरै राम्रो अनुभव, धेरै राम्रो र सहयोगी मान्छे! १ महिनापछि बिरुवाहरू कस्तो छ भनी राम्ररी जाँच गर्नुहोस्... त्यो धेरै राम्रो छ। मेरो पौडी राम्रोसँग गएन, र हामी सहमत भयौं कि म मेरो अर्को अर्डरको साथ एक प्राप्त गर्नेछु, त्यसैले यो हो। र मेरो अचम्मको लागि मैले2जरा काटेको काटें!थप पढ्नुहोस्
धेरै राम्रो पहिलो अनुभव। मेरो बोट राम्रोसँग प्याक गरिएको थियो र राम्रो अवस्थामा आइपुग्यो। यो पक्कै पनि अन्तिम हुनेछैन... समय म यहाँ अर्डर गर्छु।थप पढ्नुहोस्
मेरो पहिलो अर्डर राखियो। बिरुवाहरू राम्ररी प्राप्त गरियो। डेलिभरीमा ढिलाइ भए पनि, अझै स्वस्थ र... खुसी बिरुवाहरू! थप पढ्नुहोस्
मेरो फिलोडेन्ड्रन सेतो राजकुमारीले राम्रो र चाँडो डेलिभर गरेपछि धेरै खुसी
मलाई अज्ञात वेबसाइटमा पहिलो पटक यहाँ अर्डर राखियो। र वाह सबै राम्रो भयो... साथ! अर्डरको धेरै छिटो प्रशोधन र राम्रोसँग प्याकेज गरिएको। यदि खरिद गरिएको वस्तुले उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने, यो पठाइने छैन। सुपर! धेरै सन्तुष्ट! म पक्कै पनि यहाँ फेरि अर्डर गर्नेछु! धन्यवाद!थप पढ्नुहोस्
केही समय पहिले मैले यहाँ अर्डर गरेको थिएँ र बिरुवाहरूले अझै राम्रो गरिरहेका छन् :) सेवा पनि साँच्चै उत्कृष्ट छ... । एउटा बिरुवा क्षतिग्रस्त आइपुग्यो र त्यसपछि यसलाई फिर्ता पठाइयो!थप पढ्नुहोस्
भर्खरै एउटा फिलोडेन्ड्रन भेरुकोसम, मेरो मनपर्ने बिरुवा 🥰 अर्डर गर्‍यो वितरण गम्भीर ढिलाइ भयो त्यसैले म चिन्तित थिएँ... केहि चिन्ताहरू, तर सौभाग्य देखि यो धेरै राम्रो प्याक भएको थियो! त्यसोभए योजना भन्दा ४ दिन लामो बाकसमा दयनीय ढंगले राखेपछि, एउटा सुन्दर फुल बिरुवा बाहिर आयो। म साँच्चै खुसी थिएँ, र यो अब मेरो घरमा प्रस्ट रूपमा देखाइएको छ 🥰थप पढ्नुहोस्
महान अनुभव! डेलिभरी धेरै छिटो थियो र काटनहरू बेदाग अवस्थामा आयो। पत्र काट्ने मान्छेहरू हुन्... पनि धेरै, धेरै राम्रो! निश्चित रूपमा सिफारिस! †थप पढ्नुहोस्
धेरै राम्रो बिरुवा प्राप्त भयो। मसँग पहिले नै धेरै प्रश्नहरू थिए, र म धेरै मिलनसार र जवाफ दिन छिटो छु... खडा भयो। त्यसैले अत्यधिक सिफारिश! थप पढ्नुहोस्
बिरुवाहरूको उत्कृष्ट चयन तपाईले सामान्य बगैंचा पसलमा सजिलै फेला पार्नुहुन्न। मैले अर्डर गरेको बिरुवाहरू छिटो आइपुगे... र वास्तवमै राम्रोसँग प्याकेज गरिएको थियो। पहिलो अर्डर तर पक्कै फेरि अर्डर गर्नेछु जब मलाई घर वरिपरि केहि हरियो चाहिन्छ!😄थप पढ्नुहोस्
साँच्चै महान ग्राहक सेवा! यस स्टोरलाई अत्यधिक सिफारिस गर्नुहोस्।
केहि हप्ता अघि मैले तपाईको अनलाइन पसलमा फिलोडेन्ड्रोन व्हाइट प्रिन्सेस अर्डर गरें। यो जर्मनीमा ठूलो अवस्थामा आइपुग्यो... र यो साँच्चै सानो आँखा कैचर…🪴🤩 बिरुवा राम्रो गरिरहेको छ र म पहिले नै तपाईंको पसलमा केही नयाँ साना सुन्दरताहरू खोज्दै छु :) तपाईंले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ! जर्मनी बाट शुभकामनाथप पढ्नुहोस्
भर्खरै अर्डर राखियो, अपेक्षित भन्दा पहिले आइपुग्यो। राम्रो अतिरिक्त आश्चर्य, सावधानीपूर्वक प्याक!
यहाँ दोस्रो पटक अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ। सुपर राम्रो प्याकेज र सुन्दर बिरुवाहरु!
स्प्याग्नम मोस अर्डर गरियो, राम्रोसँग प्याकेज गरियो र छिटो पठाइयो!
मैले Cuttingsbrief बाट एउटा सुन्दर बिरुवा प्राप्त गरें। कुरियरले डेलिभरीमा लामो ढिलाइ गरे पनि, प्लान्ट आयो... सुन्दर र अन्तमा सबै कुरा राम्रो भयो। बिरुवा पूर्ण रूपमा प्याक गरिएको थियो। विक्रेता संग धेरै दयालु र व्यावसायिक संचार। पक्कै पनि सबै भन्दा राम्रो eshop मलाई थाहा छ।💚☺थप पढ्नुहोस्
यो वेबसाइट निश्चित रूपमा सिफारिस गरिएको छ! बिरुवाहरू राम्रोसँग प्याक र राम्रो अवस्थामा आइपुगे। यसबाहेक, द... धेरै राम्रो ग्राहक सेवा, छिटो र मैत्री प्रतिक्रिया। सबै एक राम्रो र राम्रो वेबसाइट जसको बारेमा गुनासो गर्न को लागी केहि छैन!थप पढ्नुहोस्
Stwkysbrief उच्च गुणस्तरको बिरुवा र सुपर प्रकारको ग्राहक हेरचाह हो। म सस्तोमा तिनीहरूको दुर्लभ बिरुवाहरूको कदर गर्छु... मूल्य र तिनीहरूको अद्वितीय बर्तन। Ciao इटाली बाट।थप पढ्नुहोस्
दाना गिलिस गोसेनार्ट्स
हो, धेरै पक्का! मैले PWP लाई अर्डर गरेको थिएँ त्यसपछि म फोटो प्रतियोगितामा प्रवेश गरें र मैले गुलाबी राजकुमारी 🥳 जितें। आज हो... तिनीहरू धेरै राम्रो अवस्थामा आइपुगे र म अविश्वसनीय रूपमा खुसी छु 👌🤗🤗थप पढ्नुहोस्
मेरो अर्डर धेरै छिटो र व्यक्तिगत रूपमा डेलिभर गरियो। धन्यवाद
अत्यन्त छिटो डेलिभरी! बिरुवाहरू धेरै सावधानीपूर्वक र उत्तम अवस्थामा बेरिएका थिए। अहिलेसम्म यो मेरो पहिलो हो... यस साइटबाट रोपण अर्डर र म तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि यो मेरो अन्तिम हुनेछैन। यसलाई पूर्ण रूपमा सिफारिस गर्नुहोस्! थप पढ्नुहोस्
२ आधा चन्द्रमाको पात र एउटा नयाँ पात सहितको धेरै राम्रो फिलोडेन्ड्रन सेतो राजकुमारी प्राप्त भयो। दुर्भाग्यवश, एक पात... यो खैरो भयो, तर मलाई लाग्छ कि घरमा आर्द्रताको कारण हुन सक्छ। (४०%)थप पढ्नुहोस्
धेरै पेशेवर, अचम्मको ग्राहक सेवा र सबै कुरा समय र सही अवस्थामा आइपुग्यो! पूर्ण रूपमा सिफारिस गर्नुहोस्... योथप पढ्नुहोस्
छिटो र चिल्लो सेवा, बिरुवाहरु को धेरै छनोट र जस्तै
धेरै उपयोगी पूर्ण ग्राहक सेवा। मेरो अर्डर सुपर छिटो र राम्रो अवस्थामा आइपुग्यो। धेरै सन्तुष्ट र चाँडै फिर्ता हुनेछ... एक पटक अर्डर गर्नुहोस्!थप पढ्नुहोस्
मोनिका भोन भर्ट
मसँग यस पसलको साथ उत्तम ग्राहक सेवा अनुभव थियो। स्टेफीले हल्का गतिमा मेरा प्रश्नहरूको जवाफ मात्र दिएनन्... तर मैले सोध्दा उनले मेरो लागि अर्को देश पनि ढुवानीको विकल्पको रूपमा थपिन्। Steffie यसको लागि धन्यवाद! बिरुवाहरू उत्कृष्ट अवस्थामा छन् र पहिले नै नयाँ पातहरू खिच्छन्। सबै कुरा राम्रोसँग प्याक गरिएको थियो र त्यहाँ गर्मी प्याक थप्ने विकल्प छ जुन जाडो महिनाहरूमा महत्त्वपूर्ण छ। म जाडोको समयमा यति धेरै पानी नदिने सल्लाह दिन्छु किनकि यदि तातो प्याक नभएको खण्डमा यसले बोटबिरुवालाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ र माटोलाई राम्रोसँग ढाक्न सक्छ ताकि यो भाँडोबाट बाहिर निस्कन सक्दैन (यसले अलिकति गर्यो तर प्याकेजले दुईवटा ट्र्याक गर्यो। देशहरू र कुरियरहरूले यसलाई कसरी व्यवहार गर्छन् भनेर नियन्त्रण गर्न असम्भव छ)। बिरुवाहरू मेरी बहिनीको लागि अचम्मको उपहार थिए र म त्यस समयमा बसेको देशमा अर्डर गर्ने कुनै विकल्प थिएन। Steffie को लागी धन्यवाद म अब मेरो लागि केहि अर्डर गर्न सक्छु :) तिनीहरूसँग विभिन्न आकार र राम्रो मूल्यहरूमा बिरुवाहरूको साँच्चै राम्रो चयन छ। म विशेष गरी फिलो सेतो र गुलाबी राजकुमारी खोज्दै थिएँ र तिनीहरूसँग ती दुवै छन्। साथै विभिन्न monsteras, cuttings र विविध बिरुवाहरु। बिरुवाहरू धेरै स्वस्थ छन् र पहिले नै नयाँ पातहरू बढ्दै छन्। हुलाकमा कुनै ढिलाइ भएको थिएन र मैले पसलबाट अद्यावधिकहरू सहित इमेलहरू प्राप्त गरिरहेको थिएँ। म धेरै खुसी छु र विशेष गरी तिनीहरूको उत्कृष्ट ग्राहक सेवाको साथ!थप पढ्नुहोस्
गत आइतबार एक अर्डर राखियो। उनीहरुलाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरिएको हो । बिरुवाहरू सुन्दर र स्वस्थ देखिन्छन्!
दुई पटक अर्डर गरियो र दुबैसँग धेरै खुसी। छिटो ढुवानी, मैत्री जवाफ र सुन्दर... उत्पादनहरू।थप पढ्नुहोस्
सुपर विशेष प्रस्ताव र धेरै किफायती। डेलिभरी छिटो थियो र बिरुवाहरू राम्रो र अपेक्षा भन्दा ठूलो थिए! धेरै... मेरो खरीद संग रोमाञ्चित र म निश्चित रूपमा फेरि अर्डर गर्नेछु।थप पढ्नुहोस्
छिटो ढुवानी र राम्रो प्याकेज! म मेरो अर्डरसँग धेरै खुसी छु र निश्चित रूपमा भविष्यमा फेरि अर्डर गर्नेछु!
मैले सोचे भन्दा अलि ठूला र यी काटिङ्गहरू र मिनी प्लान्टहरूको गुणस्तर देखेर खुशी छक्क परेको छु।... मैले पहिले नै दोस्रो अर्डर राखेको छु। विक्रेतासँग राम्रो सम्पर्क, धेरै उचित मूल्यहरू र स्पष्ट रूपमा बिरुवाहरूको लागि धेरै माया।थप पढ्नुहोस्
सुन्दर बिरुवाहरु को लागी धन्यवाद। मलाई जित्न अनुमति दिइएको सुन्दर पुरस्कारको लागि मेगा धन्यवाद (Philodendron... पिन्नतिपार्टिता, फिलेडेन्डरोन मिनिमा, होया केरी)। मलाई तपाईंको सेवा र तपाईंको सञ्चार गर्ने तरिका मन पर्छ। यो पहिलो पटक इमेल सम्पर्कको साथ सुरु भयो, केहि हप्ता पहिले बाहिर धेरै चिसो भएको देखेर, मैले तपाईंलाई इमेल गरें यदि तपाईं मेरो सेतो राजकुमारी पठाउन चाहानुहुन्छ जब मौसम अलि राम्रो थियो। मैले यस बारेमा धेरै राम्रो जवाफ पाएँ। जितेका बिरुवाहरूको बारेमा इन्स्टाग्राम मार्फत सम्पर्क पछि शानदार थियो। कति राम्रा मान्छे काम गर्छौ । छोटकरीमा, मलाई थाहा छ म भविष्यमा मेरो काटन र बिरुवाहरू कहाँ किन्न सक्छु। सबै कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईंको उत्कृष्ट सेवा, सुन्दर बिरुवाहरू, सञ्चार र पक्कै पनि तपाईंको लागि काम गर्ने अति मीठा मानिसहरूको लागि ठूलो 10 प्लस।थप पढ्नुहोस्
सबै कुरा प्रतिज्ञा गरे अनुसार भयो र बिरुवाहरू सुन्दर अवस्थामा आइपुगे! निश्चित रूपमा फेरि अर्डर हुनेछ।
नोभेम्बरको वरिपरि मेरो आफ्नै बोटबिरुवाहरू काट्न थाले, र छिट्टै फंगस ग्याटहरूको अन्तहीन स्ट्रिमसँग समस्या भयो। मेरो पछि... सुरुमा स्वतन्त्र रूपमा समस्या समाधान गर्न, मैले अन्ततः लामखुट्टेको तेस्रो/चौथो लहरको समयमा मेरो हानि स्वीकार गरें र त्यसपछि जिद्दी कीराहरू विरुद्ध पोकोनलाई आदेश दिए। उत्पादन आइतबार बिहान अर्डर गरियो, र पूर्ण रूपमा अप्रत्याशित रूपमा यो दिउँसो आइपुग्यो। तुरुन्तै काउन्टरट्याक सुरु भयो, र त्यसबेला देखि जीवित लामखुट्टे देखेको छैन। शीर्ष डेलिभरी! मैले चाँडै गर्नुपर्थ्यो। कटिंग्स पत्रमा चाखलाग्दो कटिंगहरू छन् र सञ्चार / डेलिभरी रमाइलो छ, त्यसैले म निश्चित रूपमा फिर्ता आउनेछु।थप पढ्नुहोस्
म एक नौसिखिया प्लग हुँ। पत्र काट्दा मैले जरा भएको मोन्स्टेरा काट्ने बाकस अर्डर गरें। छिटो र सफा... डेलिभरी। एक नौसिखिया प्लगको रूपमा मलाई मनपर्ने एउटा मात्र चीज थियो यदि बिरुवाहरूलाई नामद्वारा लेबल गरिएको थियो र त्यहाँ बिरुवाहरूको हेरचाह गर्ने बारे थोरै व्याख्या भएको थियो। यद्यपि, मलाई अझै पनि इन्स्टाग्राम मार्फत पत्र काटेर राम्रोसँग मद्दत गरिएको थियो।थप पढ्नुहोस्
धेरै सुन्दर र स्वस्थ बिरुवा! राम्रो प्याकेज र डेलिभरी र सेवा पनि शीर्ष पायदान थियो 👌🏼। एक धेरै सुन्दर... सस्तो मूल्यमा बिरुवाहरूको दायरा! म एक प्रशंसक हुँ र मेरो philodendron सेतो राजकुमारी 🥰 संग पूर्ण रूपमा प्रेममा छु!थप पढ्नुहोस्
धेरै राम्रो सेवा! बुधबार अर्डर गरियो र बिहीबार पठाइयो! काटन सावधानीपूर्वक प्याक गरिएको थियो ताकि यो... पक्कै पनि बाटोमा क्षति हुन सक्दैन। र काटन आफै धेरै राम्रो देखिन्छ!थप पढ्नुहोस्
मैले यो सुन्दर Monstera Variegata Stekjesbrief बाट किनेको छु। यति ठूलो र स्वस्थ। यो सावधानीपूर्वक प्याक गरिएको थियो र आइपुग्यो... सुरक्षित। यो मंगलबार राती पठाइएको थियो, मैले ट्र्याक र ट्रेस पाएँ, र बिरुवा शुक्रबार दिउँसो डेनमार्कमा डेलिभर गरियो। म अत्यधिक Stekjesbrief सिफारिस गर्दछु, तिनीहरू सल्लाह र उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दिनमा असाधारण रूपमा राम्रो छन्। म तिमीबाट फेरि बिरुवा किन्छु।थप पढ्नुहोस्
सुपर प्यारा भाँडा र सुन्दर बिरुवाहरू।राम्रो आगमन।सिफारिश गरिएको! निश्चित रूपमा फेरि अर्डर गर्नेछ।
धेरै राम्रो बिरुवा र बिरुवाहरु प्राप्त! साथै धेरै राम्रोसँग प्याक गरिएको, बिरुवाहरू अक्षुण्ण रूपमा राम्रो आए... भित्र (यी चिसो तापक्रममा पनि) धेरै सन्तुष्ट! चाँडै फेरि अर्डर गर्नेछ!थप पढ्नुहोस्
अमान्डा भ्यान वेजेल
एकदम राम्रो! मलाई सकेसम्म चाँडो स्प्याग्नम चाहिन्छ, मैले यो पनि संकेत गरें, र लगभग तुरुन्तै भुक्तानी पछि... मैले प्रतिक्रिया पाएँ कि ओकेट त्यही दिन छोड्छ ताकि यो सप्ताहन्त अघि हुनेछ! र सफल भयो! :D यसले मेरो बिरुवा बचत गर्यो त्यसैले म खुसी छु :) सम्पर्क गर्न र बनाउनु साँच्चै सजिलो र रमाइलो छ!थप पढ्नुहोस्
म यो बिरुवा पसल सिफारिस गर्न सक्छु! बिरुवाहरू धेरै राम्रो र हेरचाह संग प्याकेज गरिएको छ। उत्कृष्ट गुणस्तर पनि।... तर मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा कम्पनी पछाडिका व्यक्तिहरू हुन्: धेरै राम्रो सम्पर्क र तिनीहरू सधैं तपाईंको लागि त्यहाँ छन्! फ्यान! म यस पसललाई अत्यधिक सिफारिस गर्दछु! बिरुवाहरू हेरचाहले भरिएका छन्, र भव्य र उच्च गुणस्तरका छन्। तर मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा, पसल पछाडिका मानिसहरू हुन्: धेरै राम्रो र मिलनसार, र सधैं मद्दत गर्न इच्छुक! A+++थप पढ्नुहोस्
मैले यहाँ मेरो monstera variegata किनें। धेरै राम्रो आयो !!! केही दिनपछि उसले नयाँ बनायो... splash 😍 सुपर सेवा!थप पढ्नुहोस्
सुपर अनुकूल, राम्रो मूल्यको लागि सुन्दर बिरुवाहरू र सधैं राम्रो प्याकेज! सिफारिस गरिएको!
मैले इटालीबाट3बिरुवाहरू अर्डर गरें। तिनीहरू चाँडै आइपुगे र राम्रोसँग प्याकेज गरियो। धेरै राम्रो मूल्य र छिटो प्रतिक्रिया। सिफारिस गर्नुभयो... :)थप पढ्नुहोस्
अझै पनि मेरो सुन्दर बिरुवाहरु संग धेरै जीवित छ। महान सेवा पनि! धेरै राम्रो विक्रेता! अत्यधिक सिफारिस गरिएको
रेबेका भ्यान एर्सकोट
राम्रो वर्गीकरण र छिटो डेलिभरी! छिटो र राम्रो ग्राहक सेवा!
यो पसललाई माया गर्नुहोस्। केवल सबैभन्दा दयालु हृदय भएका मानिसहरू। सधैं हाँस्न र च्याट गर्न र तिनीहरूको लागि इमानदार मूल्यहरू छन्... बिरुवा। तपाईलाई थाहा छ कि तिनीहरू बिरुवाहरूको मायाको लागि यसमा छन्। तिनीहरू कहिलेकाहीँ यहाँ नेदरल्याण्ड्समा व्यक्तिगत डेलिभरीहरू पनि गर्छन् 🥰।थप पढ्नुहोस्
लिंडा Wiersema - Tuil
गत बुधबार केही सुन्दर बिरुवा र कटिङहरू प्राप्त भयो। धेरै राम्रो प्याकेज र सेवा शीर्ष पायदान छ!... निश्चित रूपमा तिनीहरूका लागि सिफारिस गरिएको छ जो सुपर राम्रो कटिङहरू खोजिरहेका छन्! कुनै पनि अवस्थामा, म Stekjesbrief बाट थप अर्डर गर्नेछु।थप पढ्नुहोस्
मैले यहाँ किनेको सबै कुरासँग म अति खुसी छु। बिरुवाहरू सुरक्षित र राम्रोसँग प्याकेजमा आइपुगे। द... मूल्य-गुणस्तर अनुपात उत्कृष्ट छ। प्रस्ताव व्यापक छ। तिनीहरू प्रतिक्रियाको लागि राम्रोसँग सुन्छन् / ग्राहकले पसलमा के हेर्न चाहन्छन्। सञ्चार छिटो, खुला र स्पष्ट छ। मैले यहाँ किनेका सबै जारहरूसँग पनि धेरै खुसी छु! पक्कै पनि भविष्यमा यहाँबाट थप अर्डर गर्नेछ। सिफारिस गरिएको! 🌿 फोटोहरूमा रंगीन जारहरू Stekjesbrief बाट हो। हेडेरा पनि।थप पढ्नुहोस्
राम्ररी प्याकेज गरिएको, छिट्टै पठाइयो, अब उपलब्ध नभएका बिरुवाहरूको बारेमा सम्पर्क गरियो र प्रतिस्थापनमा मद्दत गरियो... छनौट गर्न बिरुवाहरूथप पढ्नुहोस्
म केहि समय को लागी एक सुन्दर र किफायती फिलोडेन्ड्रोन गुलाबी राजकुमारी र फिलोडेन्ड्रोन सेतो राजकुमारी को लागी खोज्दै थिए। मार्फत... इन्स्टाग्राममा राम्रो वेबशपको लागि धेरै खोजी गर्दै म पत्र काट्न आएँ। वेबसाइटमा गएर जानकारी लिएर.. त्यहाँ मलाई धेरै मिलनसार र विनम्र ढंगले स्वागत गरियो। उही दिन Philodendron pp प्राप्त भयो! तस्बिरहरूले धेरै वाचा गरे, तर जब यो डेढ दिन भित्र आइपुग्यो। (राम्रोसँग प्याक गरिएको।) म सबै उत्साहित भएँ।5मिनेटको लागि हिचकिचाएर, मैले तुरुन्तै फिलोडेन्ड्रोन सेतो राजकुमारीलाई अर्डर गरें। र एक शब्द मात्र सोच्न सक्छ.. वाह.! वाह। ग्राहक मित्रता संग धेरै खुसी। छिटो र उत्कृष्ट सेवा! पक्कै पनि यहाँबाट थप बिरुवाहरू अर्डर गर्नेछ। सिफारिस गरिएको।!! नहिचकिचाउनुहोस्..!! यसमा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा छ र छिटो र सफासँग जहाजहरू छन् * तपाईले पक्कै पनि चिसो अवधिको लागि तातो प्याक थप्न सक्नुहुन्छ। मेरो बिरुवा आइपुग्दा मेरो अझै न्यानो थियो। तपाईंको मद्दतको लागि फेरि धन्यवाद। ग्राहक सेवा। र विशेष गरी तपाईंको सुन्दर बिरुवाहरू।थप पढ्नुहोस्
साँच्चै बिरुवाहरु को लागी एक शीर्ष webshop! द्रुत ढुवानी (बेल्जियमको बाटोमा मात्र 1 दिन) र तिनीहरूको लागि राम्रो गुणस्तर... मूल्यहरू। दुबै बिरुवाको जरा पहिले नै भाँडोबाट टाँसिसकेको थियो! सानो टिप: हुनसक्छ जाडोमा तातो प्याकको साथ ढुवानीको विकल्प प्रस्ताव गर्नुहोस्? चिसो तापक्रम (रातिमा चिसो) को कारण आगमनमा बिरुवाहरूलाई केही सामान्य क्षति भएको थियो, तर मैले आशा गर्नुपर्थ्यो कि 😄 म धेरै सन्तुष्ट छु, पक्कै यहाँ फेरि अर्डर गर्नेछु, र यो पसललाई 100% सिफारिस गर्नेछु!थप पढ्नुहोस्
मैले त्यही दिन मेरो अर्डर प्राप्त गरें! धेरै छिटो र बिरुवालाई कुनै पनि क्षति भएको थिएन किनकि तिनीहरूले आफैलाई मेरो लागि बुझाए... ठाउँ। सबै कर्मचारीहरू धेरै दयालु, सहयोगी र साँच्चै राम्रो छन्। बिरुवाहरूका लागि सजिलै मेरो मनपर्ने वेबशप बन्यो!🌿🌙 अपडेट: मेरो दोस्रो अर्डर र यो भव्य पिन्नतिपार्टिता हेर्नुहोस्! उत्कृष्ट बिरुवाहरू र अचम्मको छिटो र मैत्री डेलिभरी फेरि एक पटक। मेरो एकदम मनपर्ने बिरुवा नर्सरी🥰थप पढ्नुहोस्
Monstera albo borsigiana variegata कटिङ को खरीद संग धेरै सन्तुष्ट। मलाई राम्रोसँग जानकारी राखिएको थियो र... यदि तपाइँ उत्कृष्ट अवस्थामा काटन प्राप्त गर्नुहुन्छ। जराको ठूलो मात्रा त्यसैले यो तुरुन्तै आफ्नो ठूलो भाइ संग हुन सक्छ। धेरै सन्तुष्ट!थप पढ्नुहोस्
उत्कृष्ट सेवा, उत्कृष्ट बिरुवाहरू, सिफारिस गरिएको!
Os को जेड्डा
शानदार बिरुवाहरू, र उत्कृष्ट सेवा। धेरै खुसी छु कि मैले काटिएको पत्र पत्ता लगाए .. तिनीहरूले मलाई अब गुमाउने छैनन्
केली भान डेन बोश
द्रुत शिपिंग र बिरुवाहरू पूर्ण रूपमा आइपुगे। धन्यवाद!
करिना डेन ओडस्टेन - भ्यान डर ग्राफ
छिटो र सावधान ढुवानी, यो संग धेरै खुसी 😊
यद्यपि मेरो पहिलो अर्डर एक अज्ञात हुलाक कम्पनी, Tamara र को लागि धन्यवाद हराएको थियो... काटिएको पत्र जुन धेरै सही र दयालु रूपमा बाहिर निकालिएको छ। नयाँ अर्डर शीर्ष अवस्थामा आइपुग्यो। सिफारिस गर्नुभयो।थप पढ्नुहोस्
राम्रो मूल्यमा सुन्दर बिरुवाहरू, छिटो पठाइयो, सावधानीपूर्वक प्याकेज गरियो। 10 मा 10 अंक!
मैले पत्र काट्ने संग साँच्चै राम्रो अनुभव थियो! 👍 अस्ट्रियाबाट अर्डर, बिरुवाहरू राम्रो अवस्थामा आइपुगे। तामारा छ... अति उपयोगी! थप पढ्नुहोस्
Tamara धेरै सहयोगी थियो! म केही बिरुवाहरू किन्न चाहन्थे तर ती युकेमा पठाइएनन्। Tamara ढुवानी संगठित गर्न मद्दत गर्यो, र... बिरुवाहरू धेरै सावधानीपूर्वक पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीहरूले भरिएका थिए! तिनीहरू अब युकेमा पठाउँछन् र म तिनीहरूलाई सिफारिस गर्दछु ☺️थप पढ्नुहोस्
मेरो पहिलो अर्डर बेल्जियममा केही दिनमा राम्रोसँग डेलिभर भयो। धेरै राम्रोसँग प्याकेज गरिएको, काट्ने र बिरुवाहरू... कुनै क्षति नगरी बक्सबाट बाहिर निस्कियो । दोहोर्याउन लायक, धन्यवाद!थप पढ्नुहोस्
मंगलबार अर्डर गरियो र आज (शनिबार) प्राप्त भयो। पछि कोरोनाको कारण PostNL मा भीडको कारण। अझै हेर्नुहोस... सुन्दर र स्वस्थ देखिने र निश्चित रूपमा Stekjesbrief मार्फत धेरै पटक अर्डर गर्नेछ!थप पढ्नुहोस्
छिटो डेलिभरी र धेरै राम्रो प्याकेज गरिएको बिरुवाहरू! बिरुवाहरू पनि महँगो थिएनन् र तिनीहरू उत्तम देखिन्थे! छैन... क्षति वा बगहरू! म सबैलाई पत्र काट्न सिफारिस गर्न सक्छु!थप पढ्नुहोस्
मैले गत हप्ता तपाईंबाट धेरै बिरुवाहरू अर्डर गरें र म यसमा धेरै खुसी छु भनी तपाईंलाई बताउन चाहन्छु 🥰... सुपर राम्रो सेवा, राम्रोसँग प्याकेज गरिएको र मूल्यको लागि वास्तवमै राम्रो मूल्य 💁🏼‍♀️थप पढ्नुहोस्
शीर्ष सेवा र छिटो वितरण। बिरुवाहरु धेरै सुन्दर छन्। यसमा सुपर खुशी छ।
हिजो साँझ अर्डर गरियो। र हिजो मा! कस्तो विजेता! हामी खुसी छौं। †
बिरुवाहरू उत्कृष्ट छन् र राम्रोसँग हेरचाह गरिएको छ 💚 म निश्चित रूपमा काट्ने पत्र सिफारिस गर्दछु! सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्
मार्टिन डे जोंग
अनलाइन बिरुवा अर्डर गर्न कत्ति राम्रो छ? 🤩 पत्र काट्ने मनमोहक मानिसहरूले सुन्दर बिरुवाहरू पठाउँछन्... सानो देखि ठुलो र वयस्क बिरुवा देखि काटिङ्ग सम्म! 🌱 तिनीहरू राम्रोसँग प्याक गरिनेछन् ताकि तिनीहरू यातायातको समयमा सुरक्षित हुन्छन् 🚚 तिनीहरू ओसिलो पनि डेलिभर गरिन्छन् ताकि तिनीहरू पोष्टमा रातभर बसेमा केही दिनको लागि बक्समा रहन सकून्! निश्चित रूपमा अर्डर गर्न सिफारिस गरिएको छ!थप पढ्नुहोस्
छिटो ढुवानी, र सुन्दर, स्वस्थ बिरुवाहरू! यद्यपि तिनीहरू पोस्टएनएलमा पूरै सप्ताहन्तमा बसे, तिनीहरूले हेरे... अझै राम्रो, राम्रो प्याक र माटो ओसिलो। सिफारिस गरिएको! थप पढ्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2022 STEKJESLETTER.NL
यो वेबसाइटले कुकीहरू प्रयोग गर्दछ
हामी वेबसाइट कार्यक्षमता सक्षम गर्न र हाम्रो साइटको कार्यसम्पादन बुझ्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। तपाइँ हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्न जारी राखेर हाम्रो कुकीहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ। कुकी सेटिङहरूम सहमत छु
यस वेबसाइटले तपाइँको वेबसाइट नेभिगेट गर्दा तपाइँको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। यी कुकीहरू मध्ये, आवश्यक रूपमा वर्गीकृत गरिएका कुकीहरू तपाईंको ब्राउजरमा भण्डारण गरिएका छन् किनभने तिनीहरू वेबसाइटको आधारभूत कार्यहरू काम गर्नका लागि आवश्यक छन्। हामी तेस्रो-पक्ष कुकीहरू पनि प्रयोग गर्छौं जसले हामीलाई विश्लेषण गर्न र तपाईंले यो वेबसाइट कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। यी कुकीहरू तपाईंको सहमतिमा तपाईंको ब्राउजरमा भण्डारण गरिएका छन्। तपाईंसँग यी कुकीहरू अप्ट आउट गर्ने विकल्प पनि छ। यद्यपि, यी कुकीहरू मध्ये केही अप्ट आउट गर्दा तपाईंको ब्राउजिङ अनुभवमा प्रभाव पर्न सक्छ।
आवश्यक कुकीहरू वेबसाइटको उचित कार्यका लागि बिल्कुल आवश्यक छन्। यस कोटीमा केवल कुकीहरू छन् जसले वेबसाइटको आधारभूत कार्यहरू र सुरक्षा सुविधाहरूको ग्यारेन्टी गर्दछ। यी कुकीहरूले कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी भण्डार गर्दैनन्।
प्रतीक्षा सूची - प्रतीक्षा सूची उत्पादन स्टकमा हुँदा हामी तपाईंलाई सूचित गर्नेछौं। कृपया तल एउटा मान्य इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
उपलब्ध भएमा मलाई इमेल गर्नुहोस्